Guddoomiyihii Gobolka Mudug oo horay u sheegay in qarax lala damacsan yahay
Guddoomiyihii Gobolka Mudug ee Puntland ee Maanta qaraxa lagu dilay ayaa horay uga hadlay weeraro qaraxyo ah oo uu sheegay inay Al-Shabaab la damacsan yihiin inay ku dileen. Wareysi uu bixiyay ayaa waxaa uu ku sheegay in ka hore Magaalada Gaalkacyo qeybta Galmudug laga qabtay Jaakado qaraxyo ah oo lala damacsanaa in lagu dilo,isla markaana Ciidamada PSF-ta ee sirdoonka...
Taliska Ciidanka xooga oo faah faahiyey dagaal ka dhacay duleedka Baydhabo
Ciidamo ka tirsan kuwa Millateriga Dowladda Soomaaliya oo ay wehlinayeen kuwa Maamulka koonfur Galbeed iyo Xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa waxaa dagaal khasaaro geystay uu ku dhex-maray deegaan ku yaalla duleedka Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay. Dagaalka ayaa yimid,kadib markii Xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen Saldhiga Ciidamada...
wabiga shabeele ee dhaxmara Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa qaaday dad ku sugnaa halkaas, kuwaasi oo qaarkood lasoo badbaadiyay. Dad Baladweyne ayaa u shegay shabakada reegaay,com in biyaha Webiga saacadihii lasoo dhaafay uu qaaday 10 ruux oo ku sugnaa Buundo Koowaad ee isku xirta Baladweyne iyo deegaanka Ceel-jaale, waxaana lasoo...
Baarlamaanka Sweden ayaa u codeeyay in Sweden bixiso 2 milyan oo Yuuro oo lagu taageerayo cafinta deynta Soomaaliya uu ku leeyahay Sanduuqa Lacagta Adduunka (IMF). Codbixinta ayaa si wada jir ah loogu taageeray soojeedinta marka laga reebo tobanka xildhibaan ee ka tirsan ergada garabka midig ee xisbiga Sverigedemokraterna, kuwaas oo dhamaantood ka soo horjeestay arrintaas,...
Boqorka Jordan oo u digay maamulka Yahuuda
Boqorka Jordan ayaa uga digay Yahuuda “khilaaf weyn” haddii ay ku dhaqaaqdo qorsheyaal lagu doonayo in lagu soo afjaro xiisadda qaybo badan oo ka mid ah Daanta Galbeed ee la qabsaday. Wasiirrada arrimaha dibedda ee Midowga Yurub ay isla gartay in la qaado dadaallo diblomaasiyadeed oo ay isku dayaan in ay meesha ka saaraan tallaabadaas. Yahuuda waxay balan qaaday inay...
Wasiir Canshuur “Waxaa kobaca teknolojiyada aasaas u ah waa internet xawaare sare leh”
Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta & Teknolojiyada, Md. Eng Cabdi Cashuur Xasan, ayaa soo dhoweeyay mashruuca xarigga internetka 2Africa, oo la filayo inuu noqdo mid ka mid ah kuwa ugu dheer xargaha internetka ee badda hoosteeda mara, kaas oo isku xiraya Yurub, Bariga Dhexe iyo 16 dal oo ka tirsan qaaradda Afrika. “Waxaan aaminsannahay in mar kasta oo uu kordho xawaaraha...
WHO oo shaacisay in Covid-19 uu Afrika ku dili karo sanad gudihiisa 150,000 oo ruux
Coronavirus-ka cusub wuxuu dili karaa 150,000 oo qof oo ku nool qaaradda Afrika sanad gudaheed haddii aan tallaabo degdeg ah laga qaadin, sida lagu sheegay daraasad ay soo saartay WHO oo sheegaysa in ku dhowaad rubuc bilyan oo qof ay cudurka qaadi doonaan gudaha qaaradaan. Qorayaasha cilmi-baarista, ayaa Jimcihii ku soo daabacay joornaalka BMJ Global Health, waxa ayna...
Ciidanka Puntland oo qabtay gaari laga soo dhacay dhanka Galmudug
Taliska Qaybta Booliiska Gobolka Mudug ee Puntland, ayaa shaaciyay in ay gacanta ku soo dhigeen gaari nooca loo yaqaan Probox, oo todobaad ka hor laga soo dhacay Galmudug gaar ahaanna Koonfurta Magaalada Gaalkacyo. Qoraal kooban oo ka soo baxay Taliska Qaybta Booliiska Gobolka Mudug, ayaa lagu sheegay in Ciidanka Booliisku ay ku guulaysteen soo qabashada Gaarigaas oo midabkiisu...
Dowladda Kenya ayaa mar kale isku dayeysa in dib loo dhigo dhageysiga kiiska badda Soomaaliya ee hor-yaalla maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda (ICJ), sida ku cad dokumentiyo cusub oo ay dirtay. Arrintan ayaa khilaaf hor leh ka dhex-abuurtay labada dal, ayada oo Soomaaliya ay si xooggan uga hor-timid damaca cusub ee Kenya ay uga baxsaneyso inay cadaaladda wajahdo. Ra’iisul...
Jubbaland oo xukun dil ah ku fulisay Askari Askari kale xalay dilay
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ah ee maamulka Jubbaland ayaa waxa ay sheegayaan in maamulka Jubbaland uu xukun dil ah ku fuliyay Askari Askari kale xalay ku dilay Kismaayo. Ninka maanta la toogtay ayaa lagu Magacabaa Maxamed Cabdinaasir, waxaa uu ka mid ahaa Ilaalada Madaxtooyadda Jubbaland. Askariga xalay lagu dilay Kismaayo ayaa sidoo kale...